မြစ်ဆုံ: အသေးအမွှားကိစ္စများဖြင်. ၀မ်းနည်းမလွယ်ပါနဲ.
လူတိုင်း လူတိုင်း ဘ၀မှ တစ်ကြိမ်ထက်မက ၀မ်းနည်းဖူးကြမှာတော.အမှန်ဘဲ။ သို.သော် တစ်ချို.ချို.သောအကြောင်းအရာများသည် ၀မ်းမနည်းထိုက်သော အရာများ ဖြစ်သည်ကို ဂရုမပြုမိဘဲ ဖြစ်နေကြသည်။ ၀မ်းနည်းဆို သည်မှာ သူတစ်ခုထည်းမဟုတ်ဘဲ အပေါင်းအပါများပါအဖော်ခေါ်လာတတ်သည်ကို တွေ.ရမည်။ ၀မ်းနည်းမှု ဖြစ်နေသော လူတစ်ယောက်သည် အိပ်ပျက် စားပျက် အလုပ်အကိုင်ပျက် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုတွေ ချို.ယွင်း အစရှိသည်. အမျိုးမျိုးသော ထည်းမှ တစ်ခု မဟုတ် တစ်ခုတော. ဆက်ဖြစ်ကြမှာဘဲ။ ထို.ကြောင်. ၀မ်းနည်းမှုတွေ မဖြစ်ဘဲ နေလို.ရလား။ သာမာန်လူတစ်ယောက်ကတော. ၀မ်းနည်းစရာကြုံရင် ၀မ်းနည်းမှာဘဲ ၀မ်းသာစရာရှိလည်း ၀မ်းသာလိုက်မှာဘဲ။ သတိထားပြီးနေကြည်.ပါက တစ်ချို.သော အကြောင်းအရာများသည် ၀မ်းမနည်းသင်.ဘဲ
၀မ်းနည်းနေကြပြီး မိမိစိတ်ကို ညှင်းဆဲ သလို ဖြစ်နေသည်ကိုတွေ.ရမည်။ အလွယ်တစ်ကူ ၀မ်းနည်းမလွယ်ပါနဲ.။ မိမိစိတ်ကို မိမိ သိမည်သာ ဖြစ်သည်။ ထိန်းချူပ် နိုင်အောင် ကြိုးစားကြည်.ပါ။ လွယ်လွယ်နဲ. အရှုံးမပေးပါနဲ.။ အမြဲ ရုန်းကန်နေရသော လူ.ဘ၀ကို တန်ဖိုးရှိစွာဖြင်. ဖြတ်သန်းကြည်.ပါ။ အသေးအမွှားကိစ္စများဖြင်. မိမိစိတ်ကို အပင်ပန်းမခံပါနဲ.။
အောက်မှအချက်အလက်များကို fwdမေးလ် မှတစ်ဆင်. ပြန်လည်မျှဝေထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဒီအချက်အလက်များ ဖြင်. သင်ဝမ်းမနည်းမိပါစေနဲ.။
၁။ အတင်းပြောခံရခြင်းသည် အမြဲသတိရသောကြောင်.ဖြစ်သည်။
၂။ ကဲ.ရဲ.ခံရခြင်းသည် ကောင်းမြတ်သူဟု သတ်မှတ်သောကြောင်. ဖြစ်သည်။
၃။ ဆန်.ကျင်ခံရခြင်းသည် မပြိုင်နိုင်သောကြောင်. ဖြစ်သည်။
၄။ မပေါင်းဖော်လိုခြင်းသည် မနာလိုသောကြောင်. ဖြစ်သည်။
၅။ မနာလိုခြင်းသည် အောင်မြင်သောကြောင်. ဖြစ်သည်။
၆။ မုန်းတီးခံရခြင်းသည် အကြံထမြောက်သောကြောင်. ဖြစ်သည်။
၇။ ခနဲ.ခံရခြင်းသည် ထက်မြက်သောကြောင်. ဖြစ်သည်။
၈။ ဘေးဖယ်ခံရခြင်းသည် လူကြီးလူကောင်းတစ်ဦး ဖြစ်သောကြောင်.ဖြစ်သည်။
၉။ အထင်လွှဲခံရခြင်းသည် အလုပ်များများလုပ်သောကြောင်.ဖြစ်သည်။
၁၀။ နာမည်ဖျက်ကြခြင်းသည် နာမည်ကျော်တစ်ဦး ဖြစ်သောကြောင်.ဖြစ်သည်။
၁၁။ အပြစ်တင်ကြခြင်းသည် သူတစ်ပါးချီးကျူးခံရသောကြောင်. ဖြစ်သည်။
၁၂။ ပြိုင်ဆိုင်ကြခြင်းသည် သင်.ရာထူးမြင်.မားသောကြောင်.ဖြစ်သည်။
Posted by မောင်မောင် at 23:03
ဖတ် မှတ် လေ့လာသွားပါတယ်ခင်ဗျာ
13 November 2011 at 06:12
You are right. I'm busy with my job & can't think so much in my mind. It will hazard your health.
thanks ama mishell , jasmine, လွင်ပြင်လှုိုင်းငယ်
ဝမ်းနည်းချင်နေတာတွေ ပျောက်သွားသလိုလိုပဲ။း) ပို့စ်လေးဖတ်ပြီး ကိုယ့်အတွေးတွေနဲ့ကိုယ် အားရှိသွားတယ်။